ब्लग – Page2– Highlights Tourism
13 hours ago पशुपति, जनकपुर र लुम्बिनीलाई धार्मिक पर्यटनको केन्द्रका रुपमा विकास गरिने
16 hours ago दराइबोटे तालमा मनोरञ्जन लिँदै पर्यटक
7 days ago तोंनी नासा (ताङतिङ) अर्थात् रमाइलो गाउँ
2 weeks ago कामीरिता २६ औं पटक सगरमाथाको चुचुरामा, तोडे आफ्नै बिश्व रेकर्ड
4 weeks ago साउदीमा ध्वजाबाहक पुग्दा नेपालीमा झल्किएको खुसी
April 22, 2022 पहिलो पटक अवलोकनका लागि चिम्पाञ्जी
April 21, 2022 गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विधिवतरुपमा सञ्चालनमा
Home ब्लग (page 2)
यस कारण पर्यटन समृद्धिको आधार
Highlights Admin November 11, 2019
निमा लामा प्रदेश नं. ३ राजधानीबाट नजिकै छ । सङ्घीय राजधानीसमेत यही प्रदेशमा रहेकोले यो प्रदेशले अरूलाई पनि उदाहरण बनेर देखाउनु पर्ने स्थिति छ । यसका लागि पर्यटक आकर्षित गर्न नयाँ गन्तव्य पहिल्याउनु र भएकालाई प्रवर्द्धन गर्नु आवश्यक छ । यद्यपि प्रदेश सभाको सदस्यको रूपमा मेरो काम नीति नियम बनाउने…
ट्रेकिङ गाइड कर्णले नविर्सने पाँच घट्ना
Highlights Admin September 10, 2019
कर्णबहादुर घले मैले पर्यटक गाइडको रूपमा १९९० बाट काम गर्दै आएको छु । यो झन्डै २९ वर्ष लामो समय यही पेसामा रमाई रहेको छु । यसका केही कारणहरू छन्, यो पेसाबाटै मेरो जीविका चलिरहेको, त्यति मात्रै होइन, हरेक पटक म नयाँ मान्छेहरूको सङ्गत गरिरहेको हुन्छु र धेरै नयाँ ठाउँहरू पुगिरहेको…
ग्रेट हिमालयन ट्रेल: भौगोलिक र सांस्कृति विविधताको सङ्गम
Highlights Admin August 27, 2019
सञ्जीव गुरुङ ग्रेट हिमालय ट्रेल नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हिमाली भेग तथा उच्च पासहरू तरेर पुरा गरिने पदयात्रा हो । यो तल्लो र माथिल्लो गरेर दुई वटा छन् । तल्लो पदमार्ग खासै चल्दैन । उच्च भेगको पदमार्ग तुलनात्मक रूपमा बढी चलेको छ । यो पदमार्गमा ६ हजार २ सय मिटरसम्मका पासहरू…
यसरी ल्याउन सकिन्छ २० लाख पर्यटक
Highlights Admin August 6, 2019
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को लक्ष्यको रूपमा रहेको २० लाख पर्यटक भित्र्याउने कुरामा कुनै चिन्ता लिनु पर्ने म देख्दिन । अझै पनि ५ महिना बाँकी छ । खासमा अहिले पर्यटन बजारको ‘डेमोग्राफी चेञ्ज’ भएको छ । हिजोसम्म युरोप, जापान, नर्थ अमेरिका, अस्ट्रेलिया पर्यटनको उद्गमस्थल मानिन्थ्यो । अहिले आएर उनीहरूले चिनियाँ…
गण्डकी प्रदेशमा पर्यटक तान्ने जुद्धको जुक्ति
Highlights Admin July 14, 2019
गण्डकी प्रदेश सरकारले केही दिनअघि संरक्षणविद् जुद्धबहादुर गुरुङलाई पर्यटन वर्ष मुल आयोजक समितिको स‌ंयोजक तोकेको छ । हामीले संयोजक गुरुङसँग गण्डकी प्रदेशमा पर्यटनको विकासका लागि के कस्ता योजनाहरु बनाउनु भएको छ ? भनेर सोधेका थियौं ।
राजधानीवासीलाई बर्खामा उपयुक्त सात हाइकिङ रुट
Highlights Admin July 11, 2019
काठमाडौँ । व्यस्त दैनिकीबाट केही समय मुक्त हुने उपायको रूपमा राजधानीवासीले पछिल्लो समय हाइकिङ रोजेका छन् । विशेष गरेर बिदाको दिन तन र मन दुवै पुनर्ताजगीका लागि वरिपरिका डाँडाकाँडा तथा नजिकका गन्तव्यहरूमा हाइकिङ गर्नु फेसनै बनेको छ । बर्खाको बेला भने केही अप्ठ्यारो छ । सबै बाटाहरू हिँड्न सजिलो हुँदैनन्…
सगरमाथा चढ्न चीनबाट सजिलो
Highlights Admin June 27, 2019
अनुप गुरुङ काठमाडौँ । म विगत ११ वर्षदेखि आरोहणको क्षेत्रमा छु । यस अवधिमा मैले चीन र नेपाल दुवैतिरबाट सगरमाथा चढेँ । धेरै नेपालीहरूलाई चीनतिरको र चिनियाँलाई नेपालतिरको बारेमा थाहा छैन । त्यसैले यहाँ म नेपाल र चीनतिरबाट सगरमाथा आरोहण गर्दाको अनुभव सुनाउन चाहन्छु । मैले सन् २०१३ मा चीनतिरबाट…
हिउँमा जुत्ताको डोब पछ्याउदै, बाटो पहिल्याउँदै
Highlights Admin June 22, 2019
लाला गुरुङ राजधानीबाट धेरै टाढा नभएपनि थोरै मान्छेले मात्र थाहा पाएको र कमै चर्चामा आएको पीक हो, पाल्दोर । रसुवा र धादिङको सिमानामा पर्ने यो पीक जान दुवै जिल्लाबाट सकिन्छ । हामीले भने रसुवाको बाटो रोज्यौँ । काठमाडौंबाट फोरह्वीलको जिपमा एकै दिन रसुवाको गत्लाङ पुग्न सकिन्छ । पछिल्लो समय आन्तरिक…
दुई घण्टा हिलारी स्टेपमा ट्राफिक जाममा फस्दा…..
Highlights Admin June 19, 2019
पुरबहादुर गुरुङ ‘युक्त’ मेरो घर गोर्खाको लाप्रक हो । अहिले म ३१ वर्षको भएँ । यस पटक मैले सगरमाथा चौथो पटक चढेँ । हिमाल चढ्न थालेको दश वर्षमा साना ठुला गरेर झन्डै सय हिमालहरू चढेँ हुँला । सन् २००५ देखि म पर्यटन क्षेत्रमा छु । सुरुमा भरियाको रूपमा काम सुरु…
बाटै नभएको पीक नबेच्नु नी!
Highlights Admin June 13, 2019
– बिसबहादुर गुरुङ ७१२९ मिटर अग्लो बरुञ्चे हिमाल चढ्नका लागि आधार शिविर पुगेका आरोहीहरु । कुरा यही सिजनको हो । हामी यसपाली बरुञ्चे पीकको आरोहणका लागि गएका थियौं । छ जना विदेशी आरोही थिए । हामी १० जना नेपाली थियौं । जाँदा सबै जनामा उत्साह थियो । ७१२९ आरोहण गरेर…
काठमाडौँ । धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक एवं पर्यटकीय महत्व बोकेको पशुपति, जनकपुर र लुम्बिनीलार्ई धार्मिक …
तोंनी नासा (ताङतिङ) अर्थात् रमाइलो गाउँ